ကိုဇင်ဇေ ဖိတ်ခေါ်သော Live Debate နဲ့ပက်သက်၍ ~ Myanmar Anti Mlm Group
ကိုဇင်ဇေ ဖိတ်ခေါ်သော Live Debate နဲ့ပက်သက်၍
3:06 PM Unknown
ကိုဇငျဇေ ဖိတျချေါသော Live Debate နဲ့ပကျသကျ၍
ဟုတျကဲ့ Debate ဆိုတာ ဟောပွောပှဲ၊ကပြနျးစကားပွောပွိုငျပှဲ၊ presentation နားထောငျပှဲမဟုတျပါ၊ တဖကျနဲ့တဖကျစကားရလေုပှဲထကျပိုသော အခကျြအလကျနှငျ့သိက်ခာယှဉျပွိုငျပှဲကိုရညျညှနျးပါတယျ၊လူကွီးမငျးတို့ရဲ့meetingလုပျတာမြိုးကိုဇငျဇရေော ဒီထဲကလူအတျောမြားမြားပါဘူးသူတှရေော၊ကွုံဘူးသူတှရေောပါတယျ၊(MLM လုပျဖူးသူ၊ဘျောဒါကွောငျ့ရောကျဖူးသူ) ဘယျသူကဘယျလောကျရပွီးဘယျနိုငျငံကွီးကိုဘယျလိုရောကျသှားတာ၊ ဘယျလိုတှရေတာပါဆိုတဲ့ ကွှားလုံးမြား (အမှားအမှနျရောကွိတျတဲ့ပှဲ) ထပျတကျလဲကိုဇငျဇအေပါအဝငျ Anti တှအေတှကျသိပျမထူးခွားပါ၊
(ဝငျငှခှေနျကိုမကျြစောငျးထိုးတော့မယျ့ အစိုးရလကျထကျမှာ နပေုံထိုငျပုံအရငျသငျကွားတာပိုကောငျးပါတယျ^စတေနာစကားပါ^)
*တိုကျရိုကျစိနျချေါတာမဟုတျလို့(Ko Joseph fan page ပထမ post)*
မှားပါတယျ ကိုဇငျဇစေိနျချေါတာ any MLM/Network marketing company ပါ၊ မွနျပါပွညျမှာလုပျကိုငျနသေော any MLM company ပါ။
Debate ဖိတျချေါတဲ့ post မှာသခြောဖတျကွညျ့ပါ၊ သိနျး၅၀၀လုံးကို ယူဖို့မပါထားပါဘူး၊ MLM နိုငျခဲ့မယျဆို ကိုဇငျဇပေေးရမှာပါ၊တကယျလို့ ကိုဇငျဇနေိုငျခဲ့ရငျလဲမယူပါဘူး ထို၅၀၀လုံးMLMဆနျ့ကငျြရေးအတှကျmediaတှကေနအေသိပညာပေးဖို့ပွနျသုံးပေးဖို့ပဲပွောထားတာပါ၊တကယျလို့လူကွီးမငျးတို့စှပျဆှဲသလိုလောငျးကစားဆနျမယျ့လို့ထငျရတဲ့အပိုငျးတော့ပါသလိုဖွဈနပေါတယျ၊MLMရှုံးရငျMLMကိုရပျပဈပွီးကိုယျ့Networkထဲကသူတှကေိုပါမကောငျးကွောငျးအသိပေးရမယျ့အပိုငျးပါ၊ထိုအပိုငျးနဲ့ပကျသကျလို့၊မွနျမာနိုငျငံသားတှအေတှကျမကောငျးတဲ့လုပျငနျးဆိုနိုငျငံသားတယောကျအနနေဲ့မရပျသငျ့ဘူးလား?(Ko Joseph fan page ပထမpostမှာပါတဲ့မွနျမာနိုငျငံသားဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးပါ) ကိုဇငျဇရှေုံးရငျလဲ Anti-MLM လုပျနတောစှနျ့လှတျပါမယျလို့ပါ ပါတယျ၊ကနြျောတို့ပါ စှနျ့လှနျမှာပါ၊(စီးပှားရေးခြှတျခွုံကနြတေဲ့ကိုယျ့နိုငျငံအတှကျတကယျကောငျးတဲ့လုပျငနျးတခုကိုမကောငျးပွောရလောကျအောငျအထိအောကျတနျးမကပြါ)၊တခွားကုနျကစြရိတျပါသညျဆိုလို့ရုပျသံလှငျ့စရိတျသာရှိပါတယျ၊ မြှတတဲ့ဖွဈသငျ့တဲ့သဘောတခုကိုကလောငျးကစားတခုလို့သတျမှတျမယျဆိုရငျလောငျးကစားပေါ့ဗြာ၊
*သိနျး၅၀၀ထညျ့ပွီးဆေးရုံကိုလှူမှ Debate လကျခံမှာ*
သတိထားမိမလားမသိဘူးခငျဗြ၊ကိုဇငျဇေ Debate postမှာ ပထမဆုံးခေါငျးစဉျအတပျခံရတာ Aimstar မဟုတျပါ၊"နာမညျတပျစိနျချေါရငျ"လို့အသုံးအနှုနျးကသာ အာရုံစိုကျခံရဖို့ဖွဈလာတာပါ၊(Personal-မညျသညျ့MLMလုပျကိုငျနသေူမှနျသမြှမမုနျးပါ၊မညျသူမညျဝါဘယျလောကျရလဲစိတျမဝငျစားပါ၊ထိုငှသေညျဖွူစငျစှာရသလားလို့ပိုစိတျဝငျစားပါတယျ။)
Live debate လုပျလို့လူကွီးမငျးတို့ လုပျငနျးမထိခိုကျနိုငျသညျ့အပွငျ
-တလတလ သိနျးမွောကျမြားစှာကုနျနသေော marketing ပှဲမြားထကျပိုအောငျမွငျနိုငျခွငျး၊
-Network memberမြားအတှကျ ကောငျးမှနျသော အာမခံခကျြအဖွဈပွသနိုငျခွငျး၊
-တခွား MLM company မြားထကျ စဈမှနျကွောငျးသကျသပွေပွီးဖွဈခွငျး၊
-ထိုပှဲအောငျမွငျမှုမှတဆငျ့ member မြားပိုမိုဝငျလာမညျမှာသခြောခွငျးတို့ကွောငျ့ လကျခံသငျ့ပါတယျ။
ဟုတ်ကဲ့ Debate ဆိုတာ ဟောပြောပွဲ၊ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ၊ presentation နားထောင်ပွဲမဟုတ်ပါ၊ တဖက်နဲ့တဖက်စကားရေလုပွဲထက်ပိုသော အချက်အလက်နှင့်သိက္ခာယှဉ်ပြိုင်ပွဲကိုရည်ညွှန်းပါတယ်၊လူကြီးမင်းတို့ရဲ့meetingလုပ်တာမျိုးကိုဇင်ဇေရော ဒီထဲကလူအတော်များများပါဘူးသူတွေရော၊ကြုံဘူးသူတွေရောပါတယ်၊(MLM လုပ်ဖူးသူ၊ဘော်ဒါကြောင့်ရောက်ဖူးသူ) ဘယ်သူကဘယ်လောက်ရပြီးဘယ်နိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုရောက်သွားတာ၊ ဘယ်လိုတွေရတာပါဆိုတဲ့ ကြွားလုံးများ (အမှားအမှန်ရောကြိတ်တဲ့ပွဲ) ထပ်တက်လဲကိုဇင်ဇေအပါအဝင် Anti တွေအတွက်သိပ်မထူးခြားပါ၊
(ဝင်ငွေခွန်ကိုမျက်စောင်းထိုးတော့မယ့် အစိုးရလက်ထက်မှာ နေပုံထိုင်ပုံအရင်သင်ကြားတာပိုကောင်းပါတယ်^စေတနာစကားပါ^)
*တိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်တာမဟုတ်လို့(Ko Joseph fan page ပထမ post)*
မှားပါတယ် ကိုဇင်ဇေစိန်ခေါ်တာ any MLM/Network marketing company ပါ၊ မြန်ပါပြည်မှာလုပ်ကိုင်နေသော any MLM company ပါ။
Debate ဖိတ်ခေါ်တဲ့ post မှာသေချာဖတ်ကြည့်ပါ၊ သိန်း၅၀၀လုံးကို ယူဖို့မပါထားပါဘူး၊ MLM နိုင်ခဲ့မယ်ဆို ကိုဇင်ဇေပေးရမှာပါ၊တကယ်လို့ ကိုဇင်ဇေနိုင်ခဲ့ရင်လဲမယူပါဘူး ထို၅၀၀လုံးMLMဆန့်ကျင်ရေးအတွက်mediaတွေကနေအသိပညာပေးဖို့ပြန်သုံးပေးဖို့ပဲပြောထားတာပါ၊တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့စွပ်ဆွဲသလိုလောင်းကစားဆန်မယ့်လို့ထင်ရတဲ့အပိုင်းတော့ပါသလိုဖြစ်နေပါတယ်၊MLMရှုံးရင်MLMကိုရပ်ပစ်ပြီးကိုယ့်Networkထဲကသူတွေကိုပါမကောင်းကြောင်းအသိပေးရမယ့်အပိုင်းပါ၊ထိုအပိုင်းနဲ့ပက်သက်လို့၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မရပ်သင့်ဘူးလား?(Ko Joseph fan page ပထမpostမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ) ကိုဇင်ဇေရှုံးရင်လဲ Anti-MLM လုပ်နေတာစွန့်လွှတ်ပါမယ်လို့ပါ ပါတယ်၊ကျနော်တို့ပါ စွန့်လွှန်မှာပါ၊(စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတခုကိုမကောင်းပြောရလောက်အောင်အထိအောက်တန်းမကျပါ)၊တခြားကုန်ကျစရိတ်ပါသည်ဆိုလို့ရုပ်သံလွှင့်စရိတ်သာရှိပါတယ်၊ မျှတတဲ့ဖြစ်သင့်တဲ့သဘောတခုကိုကလောင်းကစားတခုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လောင်းကစားပေါ့ဗျာ၊
*သိန်း၅၀၀ထည့်ပြီးဆေးရုံကိုလှူမှ Debate လက်ခံမှာ*
သတိထားမိမလားမသိဘူးခင်ဗျ၊ကိုဇင်ဇေ Debate postမှာ ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်အတပ်ခံရတာ Aimstar မဟုတ်ပါ၊"နာမည်တပ်စိန်ခေါ်ရင်"လို့အသုံးအနှုန်းကသာ အာရုံစိုက်ခံရဖို့ဖြစ်လာတာပါ၊(Personal-မည်သည့်MLMလုပ်ကိုင်နေသူမှန်သမျှမမုန်းပါ၊မည်သူမည်ဝါဘယ်လောက်ရလဲစိတ်မဝင်စားပါ၊ထိုငွေသည်ဖြူစင်စွာရသလားလို့ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။)
Live debate လုပ်လို့လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းမထိခိုက်နိုင်သည့်အပြင်
-တလတလ သိန်းမြောက်များစွာကုန်နေသော marketing ပွဲများထက်ပိုအောင်မြင်နိုင်ခြင်း၊
-Network memberများအတွက် ကောင်းမွန်သော အာမခံချက်အဖြစ်ပြသနိုင်ခြင်း၊
-တခြား MLM company များထက် စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြပြီးဖြစ်ခြင်း၊
-ထိုပွဲအောင်မြင်မှုမှတဆင့် member များပိုမိုဝင်လာမည်မှာသေချာခြင်းတို့ကြောင့် လက်ခံသင့်ပါတယ်။
Aim Star / Zinzae